Siswoo i8 Phanter, anyị nwalere ekwentị Siswoo ọhụrụ | Gam akporosis
Anyị egosiworị gị ihe nzuzo niile nke Siswoo R9 Darkmoon, ngwaọrụ nke puputara na ihuenyo ya abuo. Ọzọ nnukwu ihe ijuanya na Asia emeputa wetara bụ Siswoo i8 Panther, ekwentị nwere okecha mma, atụmatụ dị mma yana ọnụ ahịa dị egwu.
Ka anyị gaa n’ihu inyocha ihe niile i8 Panther teknuzu njirimara, ekwentị nke ga - abụ otu n’ime ube abụọ nke Siswoo bu n’obi nweta akara na ahịa ndị Spen. Ga-enweta ya?
1 Siswoo i8 akukonta, a mara mma ekwentị na adịchaghị risịrị
2 Nka na ụzụ Siswoo i8 Panther
Siswoo i8 akukonta, a mara mma ekwentị na adịchaghị risịrị
Otu n'ime ihe ndị tụrụ anyị n'anya karịa banyere Siswoo i8 Panther bụ ogo nke njedebe ya. Ya aluminum ahụ exudes àgwà, aka bụ nnọọ obi ụtọ na ị na-achọpụta site na oge mbụ na ogo nke ha ji rụọ ekwentị a.
Ọ bụ ezie na ọ bụ eziokwu na anyị amaghị ịdị arọ ya, otu ihe ọzọ tụrụ anyị n’anya bụ obere ọ tụrụ. Siswoo i8 Panther bụ ekwentị dị mma ma dị mma, N'ezie, ọ bụ onye na-ama iPhone 6s aka na Sony Xperia Z5 Compact. Ọ bụ ezie na ekwentị ọhụrụ si Siswoo nwere nnukwu uru: ọnụahịa ya.
Nka na ụzụ Siswoo i8 Panther
Ihuenyo 4.7 sentimita asatọ na 720p mkpebi
Batrị 2.000 mAh
S na-atụ anya na Siswoo i8 Panther na-akụ ahịa ahụ na ọnwa Ọktọba ọnụahịa na-adọrọ adọrọ: euro euro 199. Cheta na Siswoo na-ekwe nkwa na iwu ndị si Spain ga-abata n'oge kachasị elu nke awa 48, yabụ a ga-enyocha ekwentị a na-adọrọ mmasị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » IFA » Siswoo i8 Phanter, anyị nwalere ekwentị Siswoo ọhụrụ